Tohatra fiakaran'ny alim-baravarankely, Box an'ny kamio aluminium, Pallet aluminium - YSXF
Manome vokatra marobe avo lenta izahay
Ny MaxxHaul Trailer Tongue Box dia natao hiakatra amin'ny tranofiara misy sarany A-Tongue mba hanomezana tahiry fanampiny ho an'ny fitaovanao, fitaovam-pilasiana, rojo fiarovana, fehy, fonosana fiara, kojakoja ivelany, tariby, kojakoja fampiasa, tariby, paosy kodiarana ary maro hafa . Aza adino mihitsy ny fitaovana na fitaovana rehefa mila azy ireo ianao! - Vita avy amin'ny fitaovana alim-bolo maivana sy mahazaka harafesina miaraka amina fanamboarana seam vita amin'ny lasitra ary famaranana palitao henjana - Ny lamina lovia diamondra dia manome hery fanampiny ...
MAZAVA HO AN'NY FIOMPIANA MORA SY NY fitondrana, ity boaty fitaovana ity dia namboarina tamina fananganana matanjaka nefa maivana hapetraka eo alohan'ireo zotram-pitaovana A-Frame. Mora ny mivory, mety tsara entina avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa raha ilaina. Vahaolana lehibe amin'ny fitehirizana ireo fitaovanao na entana ao amin'ny garainao ary manampy toerana fitahirizana bebe kokoa amin'ny tranofiara mihidy anao. ✅ DURABLE DIAMOND RUGGED DESIGN - Namboarina tamin'ny alim-bolo vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny kofehy feno vy, ho fampiasana mafy. Ny boaty fitahirizana fitaovana dia h ...
Fampidirana ny vokatra China no mpanondrana vokatra anaty rano betsaka indrindra eran'izao tontolo izao ary io no toerana anaovana ny vokatra anaty rano sy mangatsiaka. Ny tsena lehibe ankehitriny, ny ankamaroan'ny akora mangatsiaka ampiasaina dia plastika, vy tsy misy fangarony, tabilao misy galvanis sns sns. Tsy dia mahay mitondra hafanana izy ireo, mihinana angovo avo, mora simba ary sarotra ny fizotrany. Ny vokatra dia vita amin'ny ravina aluminium avo lenta. Izy io dia manana tombony amin'ny androm-piainana lava, famindrana hafanana tsara ary quic ...
Famaritana momba ny vokatra Mavesatra azo entina mitondra fiara Aluminium miakodia tohatra miloko volafotsy, mainty na araky ny angatahina Style namboarina habe namboarina manokana fitsaboana tsy misy / Oksidasiasy Feo avo, fanoherana ny harafesina, vokatra maivana mavo aseho
Ny arofanina firaka aliminioma dia ampiasaina indrindra amin'ny fiarovana ny kamio, ny tranofiara ary ny fiaran'ny injeniera, izay miaro ny fiakarana, ny fiakarana ary ny hatsarana; Ny alim-baravarankely vita amin'ny alimo dia misy lanjany maivana, fahamarinan-toerana tsara, fanoherana oksidida avo lenta, fanoherana ny harafesina, hatsarana, ary fitondra enta-mavesatra Ary ny henjana dia mety mahafeno ireo fepetra takiana mahazatra ihany koa; ny endrika sy ny habeny dia azo amboarina ihany koa arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Asehoy ny vokatra
Sehatra miasa amin'ny alim-by aluminium
Fampidirana ny vokatra Ny sehatra miasa amin'ny haavo avo lenta namboarina sy novolavolain'ny orinasanay; ny teknolojia fanodinana dia vita amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny vokatra ao an-toerana. Izy io dia manana fitaovana mandanjalanja eo amin'ny farany ambany, izay hampandeha ho azy rehefa mihoatra ny lanjany azo antoka ny enta-mavesatra, manatsara ny fiarovana ny vokatra. Famaritana ny vokatra Cargo Carriers Lifting Aluminium Alloy Platform Color Silver, Black na angatahina ...
Fampidirana ny vokatra Ity vokatra ity dia ny orinasako tsy miankina fikarohana sy ny fampandrosoana ny r & d ekipa vokatra miasa, iray amin'ireo fampiasana lehibe amin'ny xugong vondrona, sy ny orinasa hafa, dia nahazo ny tsena fiderana. Ny habe sy ny endrika azo ahitsy arakaraka ny vokatra fiara, mampihena ny fametrahana olana sarotra sasany. Endri-javatra vokatra 1. Ampiasao anaty ny fanamafisana orina isan-karazany, ampitahaina amin'ny fitaovana hafa, hialana amin'ny fomba mahomby ny olan'ny deformat ...
Fampidirana ny vokatra Ny paleta dia ampiasaina indrindra amin'ny fivezivezena ao amin'ny trano fanatobiana entana ary ny lojika. Ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fiarovana ny sakafo ary ny olana hafa dia nanjary nalaza. Pallet aluminiumalloy, ho solon'ny paleta hazo, paleta plastika ary paleta vy, efa be mpampiasa izy ireo any amin'ny firenena mandroso toa an'i Eropa sy Amerika. Famaritana ny vokatra Volafotsy volafotsy, mainty na asiana lanjan'ny 18-25kg / habe namboarina 1200 * 800 * 152/1200 * 1000 * 152/1219 * 1016 * 15 ...
Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. dia mpanamboatra vokatra aliminioma miaraka amina toerana fanandramana voaomana tsara sy hery matanjaka ara-teknika. Miaraka amin'ny karazany, kalitao tsara, vidiny mirary ary endrika kanto, ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny herin'ny herinaratra entin'ny rivotra. fitaovana, milina mavesatra sy fiara, fitaovana amin'ny masoandro ary indostria hafa. Ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy miova tsy tapaka. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy antitra avy amin'ny lafim-piainana rehetra izahay hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
ZAVATRA MISY & FAMPisehoana VAROTRA
Inona avy ireo fizotran'ny vokatra vita amin'ny aliminioma avy amin'ny akora ka hatramin'ny fanodinana sy famolavolana?
Ny famolahana mazava tsara ny aliminioma dia azo atao vokatra vita amin'ny aliminioma. Na dia samy hafa aza ny mizana sy ny endriny, ny habeny marina, ny fisehoany tsara tarehy ary ny fahombiazan'ny milamina dia mety hahasoa ny olona sy ny vahoaka ary hanangana loko hafa amin'ny fiainana. Amin'ny fiainantsika dia misy foana ny orinasa alum ...
Fitaovana Fitaovana Aluminium
Ny boaty fananganana aliminioma dia iray amin'ireo vokatra avy amin'ny vokatra boaty aluminium. Izy io dia karazana boaty izay noforonina tamin'ny alàlan'ny aliminioma alimika mba hahatratrarana ny fampiharana fametrahana fitaovana sy fitaovana fandrefesana. Tsy mitovy amin'ny boaty fanamoriana hafa, misy alimo aliminioma ity boaty fitaovana ity. Ny cha ...
Ny toetra sy ny fampiasana ny profil aluminium indostrialy
Endri-javatra 1. Misy famaritana sy habe isan-karazany, ary ny haben'ny sisiny lava sy ny lafiny fohy dia maro an'isa. Ohatra, ny 4040, 4080, 40120, 4040 iraisanay dia toradroa, ny lafiny efatra dia 40mm, ary 4080 ny lafiny lava 80mm. Ny lafiny fohy dia 40mm, ary ny lo ...